ကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်မရှိတော့ပါ...! - Thadin
[ April 22, 2019 ] စနေ သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ် ဗေဒင်ယတြာ
[ April 22, 2019 ] အငယ်ဆုံး သားသမီးလေးတွေဟာ ကြီးပွားအောင်မြင်မယ့် သူတွေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ LIFESTYLE
[ April 22, 2019 ] သင်္ကြန်အကြိုနေ့က အသတ်ခံရတဲ့ ကောင်မလေးက မြှပ်ထားတဲ့ သူ့အလောင်းနေရာကို ဝင်ပူးပြီးပြော (ရုပ်သံ) NEWS
[ April 22, 2019 ] ခင်ပွန်းက ဇနီးကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အင်မတန်မှ ‘မင်္ဂလာ’ မည်ပါတယ် RELATIONSHIP
[ April 22, 2019 ] သထုံဆရာကြီး ဦးဘရှင်ပေးသော ပုဏ္ဏက တိုက်တာချက်ချင်းပျောက်စေသည့်သုတ်…! KNOWLEDGE
HomeKNOWLEDGEကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်မရှိတော့ပါ…!
ကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်မရှိတော့ပါ…!
February 12, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on ကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်မရှိတော့ပါ…!
ကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။ယနေ့အချိန်မှာ ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ်မရှိတော့ပါ။(မှားတဲ့သူသာ တရားခံ)
ဟုတ်တယ်။ဒါက အတော်အသိနည်းတယ်ဗျ။ဒီလိုနေရာမှာယာဉ်တိုက်လို့ကတော့ ငြင်းခုန်ပီသားမှတ်ငါအရင်ရောက်တယ် သူကဝင်တိုက်တာစသဖြင့်ပေါ့…
တချို့ဆိုသိကိုမသိတာနားလည်သယောင်ယောင်လူကဝင်ပြောလိုက်ရင်ပြာယာတွေခတ်လို့ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းကိုမသိတော့တာကောင်းပီ ဒီလိုလေးရှင်းရအောင် ပုံလေးကိုကြည့်…
တူညီလမ်းဆုံလို့ခေါ်တယ်။တောင်ဘက်ကလာလာ မြောက်ဘက်ကလာလာလမ်းဧရိယာ အကျယ်ကလဲအတူတူလေလမ်းမကြီးနဲ့ လမ်းသွယ်လို အကြီး အငယ်မဟုတ်ဘူး။
အဲ့ နေအုံး ကျုပ်တို့စီမှာက အဲ့လိုအကွက်ကျကျတော့ ရှိဘူးဗျဆိုတဲ့သူအတွက် ဥပမာပေးအုံးမယ်။
A မြို့ကလာတဲ့လမ်းနဲ့ B မြို့ကလာတဲ့လမ်း ဆုံတဲ့နေရာသာာကုန်းရွာကလာတဲ့လမ်းနဲ့ ညောင်ပင်သာရွာကလာတဲ့လမ်း ဆုံတဲ့နေရာကလေးတွေအမြဲ ဆော့ဆော့နေကြတဲ့ ရွာလယ်ခေါင်းတောင် မြောက်လမ်းနှစ်ခု ဆုံတဲ့နေရာ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အဲ့ဒီလိုနေရာမှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင်မိမိယာဘက်ကယာဉ်မရှင်းဘဲ မောင်းဝင်လာတဲ့ယာဉ်အမှားပါ။တူညီလမ်းဆုံလို့ထင်ရတဲ့နေရာမှာ မောင်းလာခဲ့ပီဆိုကထဲကယာဘက်မှာကား/ဆိုင်ကယ်ရှိမရှိ အရင်ကြည့်ပါ။
မကြည့်ပဲမောင်းလို့တိုက်ရင် ကိုအမှား ကိုတရားခံပါ။ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ဖြစ် ကားဖြစ်ဖြစ်နော်။ကောင်းပါပီငါ့တူမင်းပုံထဲကလိုမဟုတ်ဘဲ လမ်းလယ်ခေါင်းမှာတိုက်ကြတယ်ဆိုရင်ရောကွာလို့ဟုတ်တယ်ဒါကတမျိုးပါ။
အဲ့ဒီတူညီလမ်းဆုံမှာ လမ်းလယ်ခေါင်တိုက်ကြရင်တော့ နှစ်ယောက်လုံးအမှားပါ။ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းနဲ့အရေးယူရင် နှစ်ယောက်လုံးအရေးယူခံရပါ့မယ်။
မင်းကတော့ပြောတာပဲ ငါတို့စီမှာ ငါ့နယ်မှာ ငါ့သူငယ်ချင်းမှာဒီလိုတိုက်တယ် ။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုခံရတာပဲလို့ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ လူသေသွားသော်လည်း ထောင်မကျဆိုတဲ့post ထဲက comတွေလိုပေါ့။
ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ်မရှိတော့ဘူး။မှားတဲ့သူတရားခံဆိုတာ တရားဝင်ပြောတာပါ။အမှန်လဲအဲ့ဒီလို အရေးယူနေပါပီ။မနေ့က post ရဲ့ com လေးထောင်ကျော်မှာ ၃၅၀၀ လောက်ကမိမိဒေသမှာ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ ရေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ပီ ဒါတကယ်လား ပုံပြင်လားတဲ့။အဲ့ဒီလိုတကယ်အသက်ဝင်ပီလားတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ ဒါအမှန်ပါ ပုံပြင်လဲမဟုတ် ယုံတမ်းစကားလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုအမှန်တရားနဲ့ပဲ အရေးယူနေပါပီ။
ဒါဆို ဟိုတလောက ငါတို့စီမှာဖြစ်ခဲ့တာ မင်းပြောသလိုမဟုတ်ဘူးကွလို့။ထားတော့ အဲ့ဒါကိုဇစ်မြစ်မလိုက်ချင်တော့ပါဘူး။အခုကပဲစမှတ်လိုက်ပါ။နောက်များ မိမိရှေ့မှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံဆုံခဲ့ရင်ဘာမှလာမပြောမခံနဲ့။ မှားတဲ့သူတရားခံပါပဲ။
မနေ့က post မှာ share တဲ့သူ လေးသောင်းကျော်လို့ အမှန်တရားတွေကို ပြည်သူတွေသိပီလို့ ဝမ်းသာမိပေမဲ့com တွေဖတ်ကြည့်တော့ ထင်သလောက်မသိကြသေးဘူးဆိုတာ သိလာခဲ့တယ်။
ဘာလုပ်ရမလဲ ငါ သည်ထက်နှစ်ဆ ကြိုးစားတင်ပြရမယ်။အားလုံးသိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မိတယ်။FM တွေ TV တွေ သတင်းသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိတယ်။မကြာပါဘူး ဆရာသမား အထက်လူကြီးတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ အားလုံးသိအောင် ကြိုးစားတင်ပြပါ့မယ်။
အခုဆိုရင် ယာဉ်တိုက်မှုအဖြစ်များတဲ့ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်းပတ်ပတ်လည်ကကျေးရွာတွေကို ကျွန်တော်ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းတွေ ဆက်တိုက် ပညာပေးဟောပြောနေပါပီ။
ယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ်ကိစ္စအများသိအောင် ဂျာနယ်တွေ သတင်းတွေထဲမှာလဲ ပါစေချင်ပါပီ။ ဒါကြောင့် သတင်းဆရာတွေ ဟောပြောပွဲနဲ့ကြုံရင် လာခဲ့ပါ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
မှတ်ထားပါနော်။ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ် No။မှားတဲ့သူတရားခံ။ဘယ်သူဘာပြောပြော အအမခံနဲ့။ဖြစ်လာရင် သူများအလိမ်မခံရအောင် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လေ့လာထားပါ။
အသိတစ်ခုက ဘဝတစ်ခုကိုကယ်နိုင်ပါတယ်။ ( 13.1.2017 နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ပြည်စံအောင်ဓမ္မာရုံ ရှမ်းစုကျေးရွာ၌ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးဟောပြောစဉ်)
ကားမောငျးတဲ့ လူတိုငျးသိထားသငျ့တယျ။ယနအေ့ခြိနျမှာ ယာဉျကွီးယာဉျငယျမရှိတော့ပါ။(မှားတဲ့သူသာ တရားခံ)
ဟုတျတယျ။ဒါက အတျောအသိနညျးတယျဗြ။ဒီလိုနရောမှာယာဉျတိုကျလို့ကတော့ ငွငျးခုနျပီသားမှတျငါအရငျရောကျတယျ သူကဝငျတိုကျတာစသဖွငျ့ပေါ့…
တခြို့ဆိုသိကိုမသိတာနားလညျသယောငျယောငျလူကဝငျပွောလိုကျရငျပွာယာတှခေတျလို့ ဘာလုပျလို့ဘာကိုငျရမှနျးကိုမသိတော့တာကောငျးပီ ဒီလိုလေးရှငျးရအောငျ ပုံလေးကိုကွညျ့…
တူညီလမျးဆုံလို့ချေါတယျ။တောငျဘကျကလာလာ မွောကျဘကျကလာလာလမျးဧရိယာ အကယျြကလဲအတူတူလလေမျးမကွီးနဲ့ လမျးသှယျလို အကွီး အငယျမဟုတျဘူး။
အဲ့ နအေုံး ကြုပျတို့စီမှာက အဲ့လိုအကှကျကကြတြော့ ရှိဘူးဗဆြိုတဲ့သူအတှကျ ဥပမာပေးအုံးမယျ။
A မွို့ကလာတဲ့လမျးနဲ့ B မွို့ကလာတဲ့လမျး ဆုံတဲ့နရောသာာကုနျးရှာကလာတဲ့လမျးနဲ့ ညောငျပငျသာရှာကလာတဲ့လမျး ဆုံတဲ့နရောကလေးတှအေမွဲ ဆော့ဆော့နကွေတဲ့ ရှာလယျခေါငျးတောငျ မွောကျလမျးနှဈခု ဆုံတဲ့နရော စသညျဖွငျ့ပေါ့။
အဲ့ဒီလိုနရောမှာ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈရငျမိမိယာဘကျကယာဉျမရှငျးဘဲ မောငျးဝငျလာတဲ့ယာဉျအမှားပါ။တူညီလမျးဆုံလို့ထငျရတဲ့နရောမှာ မောငျးလာခဲ့ပီဆိုကထဲကယာဘကျမှာကား/ဆိုငျကယျရှိမရှိ အရငျကွညျ့ပါ။
မကွညျ့ပဲမောငျးလို့တိုကျရငျ ကိုအမှား ကိုတရားခံပါ။ဆိုငျကယျဖွဈဖွဈ ကားဖွဈဖွဈနျော။ကောငျးပါပီငါ့တူမငျးပုံထဲကလိုမဟုတျဘဲ လမျးလယျခေါငျးမှာတိုကျကွတယျဆိုရငျရောကှာလို့ဟုတျတယျဒါကတမြိုးပါ။
အဲ့ဒီတူညီလမျးဆုံမှာ လမျးလယျခေါငျတိုကျကွရငျတော့ နှဈယောကျလုံးအမှားပါ။ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျးနဲ့အရေးယူရငျ နှဈယောကျလုံးအရေးယူခံရပါ့မယျ။
မငျးကတော့ပွောတာပဲ ငါတို့စီမှာ ငါ့နယျမှာ ငါ့သူငယျခငျြးမှာဒီလိုတိုကျတယျ ။ဒါပမေဲ့ ဒီလိုခံရတာပဲလို့ ပွောကွပါလိမျ့မယျ။မနကေ့တငျခဲ့တဲ့ လူသသှေားသျောလညျး ထောငျမကဆြိုတဲ့post ထဲက comတှလေိုပေါ့။
ယာဉျကွီးယာဉျငယျမရှိတော့ဘူး။မှားတဲ့သူတရားခံဆိုတာ တရားဝငျပွောတာပါ။အမှနျလဲအဲ့ဒီလို အရေးယူနပေါပီ။မနကေ့ post ရဲ့ com လေးထောငျကြျောမှာ ၃၅၀၀ လောကျကမိမိဒသေမှာ ဒီလိုမဟုတျဘူးလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတှေ ရေးကွတာတှရေ့ပါတယျ။
နောကျပီ ဒါတကယျလား ပုံပွငျလားတဲ့။အဲ့ဒီလိုတကယျအသကျဝငျပီလားတဲ့။ဟုတျကဲ့ ဒါအမှနျပါ ပုံပွငျလဲမဟုတျ ယုံတမျးစကားလဲမဟုတျပါဘူး။ဒီလိုအမှနျတရားနဲ့ပဲ အရေးယူနပေါပီ။
ဒါဆို ဟိုတလောက ငါတို့စီမှာဖွဈခဲ့တာ မငျးပွောသလိုမဟုတျဘူးကှလို့။ထားတော့ အဲ့ဒါကိုဇဈမွဈမလိုကျခငျြတော့ပါဘူး။အခုကပဲစမှတျလိုကျပါ။နောကျမြား မိမိရှမှေ့ာ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွုံဆုံခဲ့ရငျဘာမှလာမပွောမခံနဲ့။ မှားတဲ့သူတရားခံပါပဲ။
မနကေ့ post မှာ share တဲ့သူ လေးသောငျးကြျောလို့ အမှနျတရားတှကေို ပွညျသူတှသေိပီလို့ ဝမျးသာမိပမေဲ့com တှဖေတျကွညျ့တော့ ထငျသလောကျမသိကွသေးဘူးဆိုတာ သိလာခဲ့တယျ။
ဘာလုပျရမလဲ ငါ သညျထကျနှဈဆ ကွိုးစားတငျပွရမယျ။အားလုံးသိအောငျလုပျရမယျလို့ ဆုံးဖွတျမိတယျ။FM တှေ TV တှေ သတငျးသမားတှနေဲ့ခြိတျဆကျမိတယျ။မကွာပါဘူး ဆရာသမား အထကျလူကွီးတှရေဲ့ လမျးညှနျမှုနဲ့ အားလုံးသိအောငျ ကွိုးစားတငျပွပါ့မယျ။
အခုဆိုရငျ ယာဉျတိုကျမှုအဖွဈမြားတဲ့ ရနျကုနျ-မန်တလေး လမျးဟောငျးပတျပတျလညျကကြေးရှာတှကေို ကြှနျတျောယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျးတှေ ဆကျတိုကျ ပညာပေးဟောပွောနပေါပီ။
ယာဉျကွီး ယာဉျငယျကိစ်စအမြားသိအောငျ ဂြာနယျတှေ သတငျးတှထေဲမှာလဲ ပါစခေငျြပါပီ။ ဒါကွောငျ့ သတငျးဆရာတှေ ဟောပွောပှဲနဲ့ကွုံရငျ လာခဲ့ပါ ဖိတျချေါပါရစေ။
မှတျထားပါနျော။ယာဉျကွီးယာဉျငယျ No။မှားတဲ့သူတရားခံ။ဘယျသူဘာပွောပွော အအမခံနဲ့။ဖွဈလာရငျ သူမြားအလိမျမခံရအောငျ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လလေ့ာထားပါ။
အသိတဈခုက ဘဝတဈခုကိုကယျနိုငျပါတယျ။ ( 13.1.2017 နပွေညျတျော ဇယြောသီရိမွို့နယျ ပွညျစံအောငျဓမ်မာရုံ ရှမျးစုကြေးရှာ၌ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး ပညာပေးဟောပွောစဉျ)
“နားအူ နားကိုက် နားပြည်ယိုပါလျှင်” ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ ကုသလို့ရပါတယ်…!
“အချစ်ကို ဥပေက္ခာ မပြုပါနဲ့”
July 10, 2018 13
August 24, 2018 12
Users Today : 1172
Users Yesterday : 1835
This Month : 36872
This Year : 178329
Total Users : 537353
Views Today : 4192
Total views : 2430494